चिनियाँ मिडियाको झुटो दाबी : सगरमाथा हाम्रै हो !:: Mero Desh
चिनियाँ मिडियाको झुटो दाबी : सगरमाथा हाम्रै हो !
Published on: २८ बैशाख २०७७, आईतवार ११:१७
काठमाडौं : भारत सरकारले नेपाली भूभाग हुँदै चीनसँग सडक जोडेपछि काठमाडौँबाट त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
नेपाल सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाले समेत भारतीय गतिविधिको विरोध गर्यो । भारत सरकार र नेपालबीच लिपुलेकको सडकलाई लिएर विज्ञप्ति
मार्फत सवालजवाफ भइरहेको छ । यो विवाद बल्झिरहँदा चीनले सञ्चालन गरिरहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चीनको भएको भन्दै झुटो दावी गरेको छ । चिनियाँ टेलिजिभन ‘चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेकवर्ट (सिजिटिएन)’ यस्तो दावी गरेको हो । उक्त टेलिभिजनले ट्वीटर मार्फत सगरमाथाका केही तस्बिर राख्दै चीनको तिब्बतमा पर्ने जनाएको छ ।उक्त टेलिभिजनको आधिकारिक ट्वीटरमा लेखिएको छ, ‘शुक्रबार माउन्ट कोमोलांग्मामाथि देखिएका सूर्यको किरणका असाधारण दृश्यहरु । चीनको तिब्बतमा पर्ने विश्वकै सर्वोच्च शिखरलाई सगरमाथा पनि भनिन्छ ।’
चिनियाँहरु सगरमाथालाई आफ्नो भाषामा ‘कोमोलांग्मा’ पनि भन्छन् । उक्त टेलिभिजनले पनि सगरमाथाको तस्बिर राख्दै आफ्नो भूमिमा पर्ने दावी गरेको हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको यस्तो झुटो दावीप्रति धेरै नेपाली लगायत अन्य ट्वीटर प्रयोगकर्ताले पनि विरोध जनाएका छन् । धेरैको आलोचनापछि ट्वीटरमै उक्त टेलिभिजनले सच्याएको भन्दै सगरमाथालाई चीन र नेपालको सिमानामा पर्ने उल्लेख गरेको छ । जुन आफैँमा अर्धसत्य हो । जब कि, समुद्र सतहदेखि ८८४८ मिटर उचाइको सगरमाथाको उत्तरी मोहोडा मात्रै चीनतर्फ फर्केको हो ।
यद्यपि हरेक वर्ष चीनको बाटो हुँदै सयौँको संख्यामा पर्यटकहरु सगरमाथा चढ्ने गर्छन् । जुन नेपाली बाटो भन्दा सहज मानिन्छ । यसवाहेक चीनले आफ्नै क्षेत्रतर्फबाट सगरमाथाको उचाइ मापन गरिरहेको छ । मिडियाका अनुसार १९४९ पछि सगरमाथाको उचाइबारे चिनियाँ सर्वोक्षणकर्ताले पाँच पटकसम्म अध्ययन गरेका छन् ।नेपाल सरकारले भने सगरमाथाको उचाइ सम्बन्धी रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसो त, यसअघि सगरमाथाको उचाइ बारे चिनियाँ सर्वेक्षणकर्ताले फरक तथ्यांक पनि देखाएका थिए ।
चिनियाँ मिडिया सिजिटिएनले सुरुमा यस्तो लेखेको थियो :